Izidakamizwa "Cystone" yokusetshenziswa libhekisela eqenjini pharmacotherapeutic Lokudabuka isitshalo. I nomuthi kukhishelwa ngesimo amaphilisi biconvex round amaKhaladi ukukhanya umbala brown nge isici nezimagqabhagqabha amnyama ukukhanya.
Cabanga imininingwane izidakamizwa. izinto ezisebenzayo kukhona siqeshana esilandelayo:
- imbewu Solomotsveta anolaka,
- rhizomes Cyperus scarious,
- saxifrage ulimi (sifanamsindvo)
- sifanamsindvo Marena serdtselistnoy,
- izimbali zahlupha Dvuplodnika,
- onosma pritsvetkovoy (phansi ingxenye)
- uVernon umlotha (usebenzisa wonke isitshalo).
Ukwakheka futhi iqukethe nomuthi powder nahlanza mumie silicate nomcako. izinto Asizayo zihlanganisa microcrystalline cellulose, magnesium stearate, sodium carboxymethylcellulose, colloidal Silicon dioxide (Aerosil) kanye crospovidone.
Ukulungiselela "Cystone" kuyinto into eziyinkimbinkimbi nomsebenzi eliphezulu begazi, esebenza isisu spasmolytic, elwa namagciwane kanye litolicheski. Ngaphezu kwalokho, i-nomuthi aqede ukuvuvukala foci. Ngo calculi ezincane (amatshe nesihlabathi) kuthiwa oncibilikile isuswe ngu isenzo izindlela, kwesejwayelekile umchamo ukulinganisela diuresis anda.
I-ejenti kuncike ezithaka imithi wabonisa ukusetshenziswa yokwelapha eyinkimbinkimbi crystalluria, urolithiasis, sifo, glomerulonephritis, kanye nezifo isebenze ngomgudu womchamo. azithathe yakhe esiphezulu izibhebhe ezimbili kathathu ngosuku. Kuye kobukhulu isifo isikhathi Yiqiniso zokwelapha kungaba kusuka ezinsukwini ezimbalwa kuya ezinyangeni eziyisithupha. Uma kubalulekile kungenzeka ukuphathwa uphindaphindwe kuboniswa ithuluzi.
Izidakamizwa "Cystone" imfundo manual alikukhuthazi uma hypersensitive kuya izingxenye isiguli eziqukethwe nemithi.
Kulaba izimali okufanele zithathwe ngomlomo emva kokudla. Ukuze ekwelapheni urolithiasis ukhombe kungekho amaphilisi angaphezu kuka ezimbili kabili ngosuku kwezinyanga ezine kuya kweziyisithupha noma kuze esidayisa zemvelo zamatshe. Ephambi kwezinduna ukutheleleka ngomgudu womchamo kufanele uthathe esilinganayo izibhebhe efanayo imvamisa kuze ulindele ukubuyiselwa yona iphelele isifo ukugqashuka.
Isicelo zomuthi kubhekwe akuyona contraindicated abesifazane ukhulelwe noma ubuhlengikazi omama.
ejenti Pharmaceutical "Cystone" (yokusetshenziswa kule ulola focus) kungabangela ukuthuthukiswa ezihlukahlukene komzimba nezinto ezifana ububomvu kwesikhumba, amawala, angioedema, urticaria noma ukulunywa.
Kuyaqapheleka futhi ukuthi ngenxa yemiphumela kancane kancane abasafufusa imithi is hhayi Kunconywa ukuba ukuyisebenzisela ahlekise ngezindlela esifundeni sokukhipha umchamo.
Izidakamizwa "Cystone" - imiyalelo ukusetshenziswa ukwazisa - okuthengiswa amabhodlela epulasitiki, befaka engamakhulu amaphilisi. Ngamunye the amabhodlela kuyinto ebhokisini ibhokisi. Kukhona futhi esishunyekiwe isichasiselo.
Tsiston ligcinwe ngaso okushisa kusuka plus eziyishumi kuya plus degrees amathathu Celsius.
izidakamizwa nokuxhumana nezinye izidakamizwa azifani.
Impilo eshalofini zomuthi kubhekwa izinyanga ezingamashumi amathathu nesithupha kusukela ngosuku kuboniswe kwi isembozo ngumkhiqizi. Emva kwalesi sikhathi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa is hhayi Kunconywa.
Lokhu ejenti ezithaka imithi angathengwa ngaphandle kadokotela.
It is ekhiqizwa eNdiya. Umkhiqizi - "Himalaya Hudula Co".
Indlela isicelo nesondlo: isivumelwano noma inkantolo?